Amahembe ePolo → Izimpahla zokuphromotha • Imfekethiso yekhompyutha ye-P & M
Amahembe kaPolo zithandwa kakhulu phakathi kwamaqoqo entwasahlobo nehlobo, hhayi ngezinjongo zangasese kuphela, kepha futhi nezinjongo zebhizinisi nokukhangisa.
Amahembe amaPolo angahle avumelane nezidingo zomuntu ngamunye kanye nokulindelwe ngenxa yenkonzo yokufeketha yamakhompiyutha, okuyindlela eqinile kakhulu nenhle yokumaka.
Ukwaneliseka kwamakhasimende kuyinto eza kuqala kithi.
Kungakho sidala yonke imiyalo yokwenza ngezifiso ukunaka yonke imininingwane. Asinikezi kuphela ikhwalithi ephezulu, kepha futhi nensizakalo esebenzayo. Intengo ukugqokwa kwamakhompyuthaamahembe epolo angenye yezindwangu ezinhle kakhulu ngenxa yohlelo lwazo, kuya ngobunzima bephrojekthi kanye nevolumu. Noma kunjalo, izindleko ze-oda zingaziwa kusukela ekuqaleni ngesisekelo sephethini yemifanekiso etholwayo yokufekethisa.
Amahembe ePolo - izinto ezisezingeni eliphezulu
Izingubo zokukhangisa nezindwangu kumele zikhululeke, futhi ngasikhathi sinye esifanele, uma sifuna ukuthi uphawu lomkhiqizo lukhonjwe ngekhwalithi nobungcweti.
Amahembe kaPolo atholakala kweyethu isitolo enziwe ngezinto ezisezingeni eliphezulu ezivumelana nomsebenzisi futhi zimvumela inkululeko yokuhamba.
Ukuqedela ubuhle bezinto zokwenziwa kukwenza kube yingubo ezosebenza ezimbonini eziningi ezahlukahlukene. Kubukeka kukuhle kulo lonke uhlelo. Ama-halves enziwe ngezindwangu ezisindayo kunzima ukuzilimaza. Ukuzigeza kaningi akubonisi usongo. Izingubo zigcina izakhiwo zazo isikhathi eside, eziqinisekisa inzuzo yokuthenga. Kuyisiphakamiso esihle kubantu abatshala isabelo-mali sabo ngobuhlakani.
Amahembe amaPolo asetshenziswa ngokulangazela njengengubo yezisebenzi, ikakhulukazi kumasethi, isb. Ngezinto zokugqoka zesikhathi esibandayo, isb. uboya, kepha futhi baphathwa njengegajethi yebhizinisi yamakhasimende noma osonkontileka.
Ukusetshenziswa kwabo ngezingubo zokuhlobisa kuyasebenza nangezinhlobo ezahlukahlukene zemicimbi noma njengomklomelo emiqhudelwaneni. Konke kuya ngomqondo wohlobo lomkhiqizo. Njengoba ukwazi ukubona, le indlela efinyelelekayo yokuthola intshisakalo nokuqashelwa yizilaleli zakho.
Phakathi kwamahembe epolo kunezinhlobo zamadoda, abesifazane, izingane nezendawo yonke - i-unisex.
Onke amamodeli atholakala ngemibala ehlukahlukene, okwenza sikwazi ukukhetha i-T-shirt ezimweni nasendaweni, okubuye kube yinzuzo enkulu. Amamodeli wokuqamba enza iqembu elikhethekile lemikhiqizo, ngenxa yokuthi kungenzeka ukukhuphula izinga lokuphepha emsebenzini.
Iqembu lethu lizokujabulela ukukusiza ukhethe umkhiqizo ofanele futhi uwenze ngezifiso. Zonke izindwangu ezenziwe endlini yethu yokufekethisa zenziwe ngesisekelo sobuchwepheshe besimanje. Sinesipaki somshini esithuthukile esisinikeza umsebenzi osebenza kahle kanye nekhwalithi ephezulu kumakhasimende ethu.
Uhla oluphelele lwamamodeli lungathengwa zombili esitolo sethu se-inthanethi www.pm.com.pl noma esitolo sethu kwa-Allegro "PRODUCER-BHP". Uma ufuna ukubona ukwenziwa komsebenzi futhi wazi ama-oda ethu wokufekethisa oyisampula, sicela uvakashele ithebhu lethu ukuthola okuningi i-firmie.
ngokuqondene nehembe lepolookuhamba kahle ngehembe lepoloukuthi uzogqokani ngehembe lepoloukuthi uzogqokani ngehembe lepolookufanele ukwenze ngehembe le pololapho amahembe amahle epoloukugqoka kanjani amahembe wepolouwasha kanjani amahembe wepoloindlela yoku-ayina amahembe wepolousonga kanjani amahembe epolohlobo luni lwe-sweatshirt yehembe lepoloubude obungakanani bamahembe epoloumbala onjani wamahembe epoloyiziphi izicathulo ze-polo shirtyini ibhulukwe lehembe lepoloizikipa zabesilisaamahembe wepoloamahembe e-adidas polo aprintiweamahembe epolo abesifazaneAmhembe amaPolo abesifazane aprintiweizikipa zepolo zenkampani ezinokubhaliweizithelo zamahembe e-loom polo nge-printamahembe polo laphoamahembe wepolo ukuthi ugqokwa kanjaniamahembe e-lacoste poloamahembe wepolo wamadodaAmahembe e-polo akwaLacosteizikipa zabesilisa ezinokuphrintaihembe lasemsebenzini elinokuphrintaShizi wepolo ngephrintaamahembe epolo ane-allegro printamahembe wepolo ane-Bydgoszcz phrintaamahembe epolo anenani eliphrintiweamahembe epolo anokuphrinta kwabesifazaneamahembe wepolo aprintiwe wezinganeamahembe wepolo ngokushicilelwa kwenkampaniamahembe epolo anombhalo we-physiotherapistShizi wepolo nge-Krakowamahembe epolo anombhalo wesikebheShizi wepolo nge-Lublinshorts polo nge ukuvikelwa ukuphrintaShizi wepolo ngephrinta yomhlengikazishizi wepolo nge-pozna print ephrintiweShizi wepolo nge-Warsawamahembe epolo onombhalo wakho uqoboshizi wepolo nge-imprint wrocławShizi wepolo ngephrinta yakhoshizi polo shizi nge-etigro printsshizi polo shows yakho Warsawamahembe wepoloT-shirts ngephimbo lakho lokuphrinta